Walitti bu'iinsa Qobbootti uumameen miidhaan qaqqabe - BBC News Afaan Oromoo
Walitti bu'iinsa Qobbootti uumameen miidhaan qaqqabe
Maqaan isaanii akka hinxuqamne kan himan jiraataan magaalaa Qobboo tokko, walitti bu'iinsi kaleessaa jalqabee geggeefamaa jiru mucaa ol adeemaa tokko dabalatee lubbuu namoota hedduu akka galaafate BBC'tti dubbataniiru.
Lakkoobsa namoota du'aniiru jedhamanii baruuf yaalii goone keessatti odeeffanno addaa adda kan arganne wayita ta'u, hospitaala irraa adda baasuuf aalii gooneenetti hinmilkoofne.
Akka jiraattoonni jedhanitti garuu namoota sadii fi isaa ol du'aniiru. Humna naga eegdotaa irras miidhaan akka gahe dabalani dubbataniiru.
Jiraataan magaala Qobboo waliin haasofne biroonis : ''Ajjeechaan magaalaa Waldiyaatti raawwatee ture Qobboo keessatti muddama uumee ture. Utuu kanaan jiruu qabeeni keenya nujalaa samamuu fi barbadaa'uu danda'a jedhanii kan sodaatan abbootiin daldalaa meeshaalee isaanii bakka biraatti geessuuf yaalaa turani. Dargaggoon tokko tokkoos 'utuu asitti homtu hinta'iin akkamiin akkas gootu' jedhanii gaafachuu isaanii irraa kan ka'e ukkurri dhalate achiis gara walitti bu'iinsaatti cehe,'' jechuun ibsaniiru.
Magaalatti keessatti mormiin kan eegale kalleessa waare booda sa'a 8 (ALI) wayita ta'u, gara walitti bu'insaatti cehuun manneen daldalaa fi wajjiraaleen mootummaa gubuu kan eegalame naannoo sa'atii 10'tti akka ture jiraattota magaalatti irra dhagahuun danda'ameera.
Kamisa har'aa hanga sa'atii 3'tti magaalattiin ammayyu muddama keessa turtuyyuu walitti bu'iinsi hinturre kan jedhan jiraataa magaalaa kanaa kan biroon ''Ganama sa'a 3 booda garuu dargaaggoonni hedduun gara dhaabbata misoma qonnaa Zalaqaa jedhamuu galuun trakteerootaa fi meeshaaalee qonnaa addaa addaa dallaa keessa turan barbadeessan. Ijaarsa (mana) dhabbatichaa irras miidhaa gaheera,'' jechuun dubbatu.
Akka jiraatoonni kun jedhanitti, dhaabbanni kun xiyyeeffannaa uumataa keessa akka galu kan isa godhe ''lafa heektaara hedduun qootee buula irraa fuudhamuun dhabbata kanaaf kennamuun walqabatee qurramni waan tureefi,'' jechuun dubbatu.
Qabeenyaan isaa kan lammiiwwan Hoolaandii kan ta'e dhabbanni misooma qonnaa Kiwwe irras miidhaan qaqabuu isaa abbaan qabeenyaa qonnaa kana BBC'tti himaniiru.
Kana malees haleellaan kun jaarmiyaalee mootummaa irratti kan xiyyeefate ture. Kaleessa mani murtii gubachuu isaa kan himan jiraataan kun har'a ammoo waajjirri barnoota, waajjirri Sochii Demokratawaa Uumata Amaaraa fi manneen jireenyaa fi dhaabbata daldalaa kan degergtootaati mootummaatti jedhaman irraas miidhaan gaheera.
Jiraattoonni tokko tokko qabeenyaan kan jalaa gubate namoota deggertoota mootummaa ta'an qofa wayita jedhan, kaan ammo haleellaan kun sabummaa irratti xiyyeeffachuun kan raawwateedhaa jedhu.
Jiraattotarra hubbachuu akka dandeenyetti, humni nageenyaa heddu gara magaalatti galuun walqabatee nagaan waan bu'e fakkaata.
Dhimma kana irratti odeeffanno akka nuuf kennaniif waajjirra kominikeshanii nannichaa, komishanii poolisii akkasumas bulchiinsaa fi dhimmoota nageenyaa bilbilaan argachuuf tataafiin goone hinmilkoofne.
Magaaloota Waldiyaatti dhihoo ta'an kan akka Roobiiti fi Gubbiyyeettis walitti bu'insi akka jiru dhagahameera.
Gosa siyaasaa gaaffii ummataatiif deebii ta'usaa odeessuu